Wazi kanjani ukuthi i-iPhone ingeyokuqala noma ingeyamanga futhi ingakhohliswa 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kungenzeka wazi ukuthi i-iPhone ingeyangempela noma iyimbumbulu ngandlela thile. Umnikazi angahlola i-IMEI (International Mobile Equipment Identification) noma abuke inombolo ye-serial kuwebhusayithi ye-Apple. Ngaphezu kwalokho, kunezici zomzimba ezisiza ukukhomba ukuthi ngabe le divayisi ingeyangempela noma ilingisa. Phakathi kwabo, isikrini, amathikithi kanye nelogo.
Nakhu ukuthi ungasho kanjani ukuthi i-iPhone iyiqiniso noma cha futhi ungakhohliswa.
Nge-IMEI nangenombolo ye-serial
I-IMEI (isifinyezo esiNgisini ku Ubunikazi Bethimba Lezelula Lamazwe Omhlaba) inombolo eyingqayizivele yokuhlonza iselula ngayinye. Sengathi ngumazisi onomthetho wamazwe omhlaba. Ayikho enye idivayisi emhlabeni ezoba nokulingana.
Inombolo ye-serial yikhodi enezinhlamvu nezinombolo eziqoqa ulwazi mayelana nedivayisi, njengendawo nosuku lokwenziwa, imodeli, phakathi kwabanye. Ngokuvamile, ingatholakala ezindaweni ezifanayo ne-IMEI.
Ku-iPhone yasekuqaleni, le datha iyatholakala ebhokisini, emzimbeni we-smartphone, nangesistimu yokusebenza.
Ukudlala / i-Apple
I-IMEI nenombolo ye-serial kuseduze kwebhakhodi ebhokisini ledivayisi. Qhubeka, kuzobhalwa I-IMEI noma i-IMEI / MEID (1) kanye (S) inombolo ye-serial (2), Kulandelwe ukulandelana kwezinombolo noma kwe-alphanumeric. Lezi zintambo kufanele zifane nalezo eziboniswe emibuzweni engezansi.
Ukuthola i-IMEI ngohlelo, vele ulandele indlela Amasethingi → Okuvamile → Mayelana. Skrolela ezansi kwesikrini uze uthole leyo nto IMEI / MEID mi Inombolo yomkhiqizo.
I-iPhone ngayinye inenombolo ye-IMEI ebhaliswe kudivayisi uqobo. Indawo iyahlukahluka ngemodeli. Eziningi zazo, iyatholakala kuthileyi le-SIM.
Ku-iPhone 6, i-iPhone 6 Plus, i-iPhone SE (isizukulwane sokuqala), i-iPhone 1s, i-iPhone 5c, ne-iPhone 5, okuqukethwe kuqoshwe ngemuva kwe-smartphone. Ingatholakala ngezansi nje kwegama. iPhone.
I-Apple ID Yezinwele
Ungangena kwiwebhusayithi ye-Apple ID nganoma yisiphi isiphequluli se-inthanethi. Vele ufake imininingwane yakho yokungena ngemvume bese uskrolela phansi esigabeni Amadivaysi. Chofoza esithombeni sedivayisi ofuna ukuthola i-IMEI kuyo bese kuvuleka iwindi.
Ngaphezu kwenombolo, imininingwane efana nemodeli, inguqulo nenombolo ye-serial iyaboniswa.
Enye indlela yokuthola i-IMEI ngokuthayipha * # amashumi amabili nanye # kukhibhodi yedivayisi. Imininingwane izoboniswa ngokuzenzakalela esikrinini.
Ngenkonzo Hlola ukumbozwa (Hlola ukumbozwa)
I-Apple inewebhusayithi lapho umsebenzisi angabheka khona isimo sewaranti ye-Apple kanye nokufaneleka ukuthenga okungeziwe nge-AppleCare. Ukuze wenze lokhu, udinga ukufaka inombolo ye-serial yedivayisi.
Uma i-iPhone ingeyona eyangempela, ikhodi ngeke ibonwe. Uma konke kuhamba kahle, kungenzeka wazi ukuthi usuku lokuthenga lusemthethweni nokuthi ukwesekwa kwezobuchwepheshe nokulungiswa nokufakwa kwensiza kuyasebenza.
Uhlelo lokusebenza nezinhlelo zokusebenza ezifakiwe
Onke ama-iPhones asebenza kuphela ohlelweni lwe-iOS. Okusho ukuthi, uma uvula idivayisi futhi iyi-Android, akungabazeki ukuthi idivayisi iyimbumbulu. Kodwa-ke, abenzi bomgunyathi bavame ukusebenzisa amadivayisi alingisa ukubukeka kwesoftware ye-Apple.
Ezimweni ezinjalo, kufanelekile ukubheka ukuthi ngabe ifoni inezinhlelo zokusebenza ezikhethekile, njenge-App Store, isiphequluli seSafari, umsizi weSiri, phakathi kwabanye. Ukususa ukungabaza, ungabheka inguqulo ye-iOS kuzilungiselelo.
Ukuze wenze lokhu, landela indlela Izilungiselelo → Okujwayelekile → Ukuvuselelwa kweSoftware. Lapho, umsebenzisi ubhekene nenguqulo yesistimu nolwazi olumayelana nayo, njengamadivayisi ahambisanayo nezindaba.
Lesi seluleko sisebenza ikakhulukazi kulabo abathenga i-iPhone eseyenziwe ngesandla. Kwesinye isikhathi umsebenzisi wokuqala angalimaza isikrini futhi asishintshe nge-non-Apple noma inkampani eqinisekiswe yinkampani.
Kepha yini inkinga ngokusebenzisa i- Ukuqapha okungesikho okwangempela? "Ukuboniswa okungeyona i-Apple kungadala izingqinamba zokuhambisana nokusebenza," kuchaza umkhiqizi. Lokhu kungasho amaphutha kufayela le- ukuthinta okuningi, ukusetshenziswa okuphezulu kwebhethri, ukuthintwa okungazibandakanyi, phakathi kwezinye izithiyo.
Kusuka ku-iPhone 11 kungenzeka ukubheka imvelaphi ngohlelo. Ukuze wenze lokhu, vele ulandele indlela Amasethingi → Okuvamile → Mayelana.
Uma ubona Umlayezo obalulekile esikrinini. Akunakwenzeka ukuqinisekisa ukuthi le iPhone inesikrini sokuqala se-Apple, ukufaka esikhundleni kwasekuqaleni kungenzeka ukuthi akusetshenziswanga.
Ezinye izici zomzimba
Ezinye izici zomzimba wedivayisi zingakhombisa ukuthi ngabe i-iPhone iyiqiniso noma cha. Ngakho-ke uma ucabanga ukuthenga idivayisi ye-Apple, kubalulekile ukuthi wazi eminye imininingwane.
Kusukela i-iPhone 7, i-Apple ayisebenzisanga ama-jack headphone wendabuko kuma-smartphones ayo, aziwa nge-P2. Ngakho-ke, kungenzeka ukusebenzisa kuphela labo abanesixhumi sohlobo lombani, sona esifanayo esikuvumela ukuthi uvuselele i-smartphone yakho. Noma amamodeli angenantambo, axhunywe nge-Bluetooth.
Ngakho-ke uma uthenge i-iPhone entsha ene-headphone jack ejwayelekile, idivayisi ayiyona yangempela.
Onke ama-iPhones anelogo edumile ye-Apple etholakala ngemuva kwedivayisi. Kwasekuqaleni, lapho umsebenzisi eslayida isithonjana, ababoni mehluko noma ukukhululeka maqondana nomphezulu.
Ngaphandle kokukhethekile ngokwengeziwe, kunzima kubakhiqizi bezinto eziphindaphindwayo nezomgunyathi ukukhiqiza lolu hlobo lokuvela. Ngakho-ke, umphumela uvame ukuba negebe phakathi kobuso nesithombe se-Apple.
Hlala ubukele ukuthola eminye imininingwane
Nedivayisi esesandleni, kungenzeka ukuqhathanisa ukubukeka kwayo nencazelo eyenziwe kuwebhusayithi ye-Apple. Bheka imininingwane efana nemibala etholakalayo yaleyo modeli, ukuma kwezinkinobho, amakhamera nokukhanya, phakathi kokunye.
Le nkampani ize ichaze nohlobo lokuqeda. Njenge "ingilazi eyenziwe ngomatte, enohlaka lwensimbi olungagqwali oluzungeze uzimele," esimweni se-iPhone 11 Pro Max.
Bona futhi umthamo otholakalayo wemodeli ngayinye. Uma unikela nge-iPhone X engu-128GB, qaphela, ngemuva kwakho konke, uchungechunge lunezinketho ezine-64GB noma i-256GB kuphela.
Yini i-iPhone engenayo
Ama-IPhone awanayo imisebenzi ejwayelekile kuma-Smartphones avela kweminye imikhiqizo. Amadivayisi we-Apple awanayo ithelevishini yedijithali noma izimpondo ezibonakalayo. Futhi abanalo idrowa lamakhadi wememori noma i-dual-sim.
Ukunakwa: amamodeli afana ne-iPhone XS, i-iPhone XS Max, i-iPhone XR noma kamuva abe nomsebenzi wokulingisa ophindwe kabili. Yize kunesikhala se-chip eyodwa kuphela, kusetshenziswa i-nano-SIM khadi ne-e-SIM khadi, okuwuhlobo lwedijithali lwe-chip.
Qaphela amanani aphansi kakhulu
Kubonakala kucace kancanyana, kepha lapho okunikezwayo kukuhle kakhulu ukuthi kungabi yiqiniso, kubalulekile ukusola. Uma uthola i-iPhone ngentengo ephansi kakhulu esitolo esithile uma kuqhathaniswa nezinye izikhungo ezethembekile, sola.
Kuyaphawuleka ukuthi amanye amadivayisi okuqala athengiswa izinkampani ezinkulu ngamanani ashibhile ngoba ayaboniswa noma avuselelwa, abizwa nangokuthi kuguquliwe. Ngokuvamile, izitolo zibonisa isizathu sokwehliswa kwenani.
I-iPhone yokubukisa, njengoba negama lisho, yile ebivele isikhashana. Lokho ukuthi, bekungavikelwe ekuphumeni futhi kungahle kube nokunye ukumaka ngenxa yokusebenzisana kwamakhasimende noma kwabasebenzi.
Idivayisi ebuyiselwe kabusha ngeyokuthi, ngenxa yenkinga ethile, yabuyiselwa kumenzi futhi izingxenye zezinkinga zashintshwa. Ibhethri nangemuva nakho kuyashintsha. Ngokuvamile zithengiswa kuze kufike ku-15% off futhi zineziqinisekiso ezifanayo ne-smartphone entsha.
Ungazi kanjani ukuthi ngabe i-iPhone yami ibuyiselwe kabusha
Kungenzeka wazi ngokusebenzisa inombolo yemodeli. Ukuze wenze lokhu, iya ku Amasethingi → Mayelana. Uma inombolo yemodeli iqala ngohlamvu METRO, kusho ukuthi yintsha. Uma uqala ngohlamvu F, Ilungisiwe kabusha.
Uma ngenhlanhla uyibona le ncwadi P, kusho ukuthi yenziwe ngezifiso. Incwadi enyakatho ikhombisa ukuthi inikezwe yi-Apple ukufaka esikhundleni sedivayisi enephutha.